Sony Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | UHI, Sony က
ကောင်းပြီ MWC 2.018 မှာဆိုနီကနေ့။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ကို Sony ချစ်သူများနှင့်သူတို့၏စမတ်ဖုန်းများပြက္ခဒိန်တွင်အချိန်အတော်ကြာမှတ်သားခဲ့သည်။ Samsung Galaxy S26 စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားကိုသိပြီးသည့်နောက်တွင်၊ Huawei မှလက်ပ်တော့ပ်များနှင့်အခြားအသစ်အဆန်းများ။ ဆိုနီရဲ့အလှည့်ရောက်လာပြီ Xperia XZ2 နဲ့ Xperia XZ2 အသစ်တွေဘယ်လိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းတယ်ဆိုတာပြောပြပါမယ်.
ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်သောစျေးကွက်တွင်ဆိုနီသည်သူ့အားအမြဲတမ်းသစ္စာရှိခဲ့သည် အချို့ကိုဝေဖန်ပြီးအခြားသူများကဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ချီးမွမ်းသည်ဆိုနီသည်ပရိသတ်တွင်အမြဲရှိသည်။ ယနေ့တွင်ပရိသတ်များနှင့်စပ်စုသူနှစ် ဦး စလုံးသည် Sony MWC 2.018 တွင်တင်ပြခဲ့သောမော်ဒယ်သစ်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
1 ယခု Xperia XZ2 နှင့် Xperia XZ2 အသစ်တို့ဖြစ်သည်
2 ကင်မရာပိုကောင်းတယ်၊ ပါဝါပိုကြီးတာ၊
3 Sony Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အသစ်၏အချက်အလက်စာရွက်
4 Xperia XZ2 MWC18 မှဗွီဒီယိုတွင်
5 Xperia XZ2 Compact MWC18 မှဗွီဒီယိုထဲတွင်
6 Sony မှအသစ်အဆန်းကိုမင်းဘယ်လိုမြင်သလဲ။
ယခု Xperia XZ2 နှင့် Xperia XZ2 အသစ်တို့ဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းလောကအတွက်ဆိုနီ၏အလောင်းအစားအသစ်၏တင်ပြချက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းနှစ်ခု ချိုး အနည်းငယ် (အချိန်နှင့်အမျှ) လာတဲ့ဗေဒနှင့်အတူငါလုပ်သူများခံစားရတယ် ဒီကုမ္ပဏီရဲ့။ ငါတို့လေ့လာတယ် အနား နှင့်အနည်းငယ်ထောင့် ပိုမို rounded ငါတို့တွေဒီနေ့မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့သတင်းတွေနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေတယ်။
ဆိုနီ၏ကတိကဝတ် "အဆုံးမဲ့" မျက်နှာပြင်ပါသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး။ အသစ် Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အင်္ဂါရပ် ၅.၇ နှင့် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်များအသီးသီး။ ထိုအကောင့်နှစ်ခုလုံး နီးပါး Non- တည်ရှိ frames များကိုအတူ။ Sony မိသားစု ၀ င်သစ် ၂ ယောက်ကိုအထင်ကြီးစေသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ သူတို့ရှိသည် Full HD resolution နှင့်မျက်နှာပြင်ရှုထောင့် 18:9ရှုထောင့်အချိုး.
Xperia XZ အသစ်အတွက်နောက်ထပ်ဝတ္ထုတစ်ခုမှာလက်ဗွေဖတ်စက်၏တည်နေရာဖြစ်သည်။ သူတို့ကို start ခလုတ်ပေါ်တင်ပြီး၊ ဘေးထွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း၏သိပ်မအောင်မြင်သော "စမ်းသပ်မှု" ပြီးနောက်။ Sony ကလက်ဗွေဖတ်စနစ်ကို၎င်း၏နောက်ဖက်တွင်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဓာတ်ပုံကင်မရာကိုအောက်တွင်။ အများကြီးပိုအဆင်ပြေခြင်းနှင့် Ergonomics တည်နေရာ။ ဘယ်အသုံးပြုသူများကိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
Sony စမတ်ဖုန်းများ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာကင်မရာများဖြစ်သည်။ ဆိုနီသည်ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောအရည်အသွေးနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ အခြားကဏ္developmentsများကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း Sony သည်ကျန်တဲ့ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်အတူတူမလောင်းပါ။ Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အသစ်တွင်မှန်ဘီလူးကင်မရာတစ်ခုသာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့တွင်ကျန်သူများထက်အရည်အသွေးနိမ့်သောကင်မရာများရှိလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
အသစ် XZs နှစ်ခုတပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ် 19 megapixelf/ 1.8 resolution ရှိသည့်ကင်မရာများ။ ထူးခြားသောကင်မရာကိုကမ်းလှမ်းရန်မည်သည့်မှန်ဘီလူးနှင့်နှစ်ခုကင်မရာမျှမလိုအပ်ပါ။ ထွင်းထုနိုင်စွမ်း 4K HDR resolution ဗီဒီယို။ ထိုအခါလူကြိုက်များအသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ "စူပါနှေးကွေးသော" mode။ ဘာမှတ်တမ်းတွေရှိလဲ Full HD resolution ဖြင့်တစ်စက္ကန့်ကို ၉၆၀ ဘောင်နှုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ အစစ်အမှန် pass ။
ဘက်ထရီတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Sony က Xperia အသစ်ကိုပိုပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးချင်တယ်။ နှင့်စပ်လျဉ်း က Xperia XZ2 Compactတစ် ဦး ရှိလိမ့်မည် 2.870 mAh ဘက်ထရီ။ ပြီးတော့ Sony Xperia XZ2 ဘက်ထရီနှင့်အတူ 3.180 mAh ဘက်ထရီ။ ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များတိုးမြှင့်ခြင်းသည်မည်သို့ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ပိုကြီးတဲ့ဗားရှင်းများအတွက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ။
အလားအလာရှိတဲ့အသင်းကိုဖြည့်စွက်ရန်၊ နှစ်ခုဗားရှင်း Sony Xperia XZ2 ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Qualcomm Snapdragon 845။ ဒီစက်တွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကအရမ်းမြင့်မားတယ်။ ဒါကစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စေတယ်။ Sony Xperia XZ2 ကိုဒီပရိုဆက်ဆာတွေနဲ့အတူပေးမှာပါ။ ထိုသူတို့ကအကြောင်းကိုပါလိမ့်မယ် အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreoဘယ်လိုဘယ်လိုမဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Sony Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အသစ်၏အချက်အလက်စာရွက်
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Sony Xperia XZ2 Compact
အမှတ် Sony က Sony က
ပုံစံ XZ2 Compact XZ2
operating system အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo
ဖန်သားပြင်5လက်မ 5.7 လက်မ
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64 Gb အထိ microSD 400 Gb အထိထောက်ပံ့သည် 64 GB အထိပါ ၀ င်သော microSD သည် 400 GB အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်
နောက်ကင်မရာ 19 Mpx 19 Mpx
ရှေ့ကင်မရာ5Mpx5Mpx
ဆက်သွယ်မှု USB 3.1 အမျိုးအစား C - NFC - Bluetooth USB 3.1 အမျိုးအစား C - NFC - Bluetooth
သည်အခြား features တွေ လက်ဗွေဖတ်စက် - Dual SIM လက်ဗွေဖတ်စက် - Dual SIM
ဘက်ထရီ 2.870 mAh ဘက်ထရီ 3.180 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 135 x ကို 65 x ကို 12.1 မီလီမီတာ 153 x ကို 72 x ကို 11.1 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 168 ဂရမ် 198 ဂရမ်
စြေး 599 ယူရို 799 ယူရို
Xperia XZ2 MWC18 မှဗွီဒီယိုတွင်
Xperia XZ2 Compact MWC18 မှဗွီဒီယိုထဲတွင်
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဆိုနီသည်သတင်းကိုမသိရှိရသေးပါ။ ဒီ MWC တွင်သူသည်အသားများအားလုံးကိုကင်ပေါ်တွင်ထားခဲ့သည် ရှုပ်ထွေးသောစျေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ရန်အတွက်၎င်းသည်သဘာဝအပေါက်ကိုရရှိရန်အလောင်းအစားနှစ်ခုဖြင့် ထပ်မံ၍ စတင်ခဲ့သည်။ မည်သည့်ပြိုင်ဘက်ကိုမဆိုတိုင်းတာနိုင်သောစွမ်းရည်မြင့်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဆိုနီသည်အဆင့်မြင့်သောနေရာတွင်ရှိနေသေးသလား။
Device နှစ်ခုလုံးသည်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးနီးပါးကိုမျှဝေသည်။ အရွယ်အစား၊ အထူ၊ ဘက်ထရီနှင့်အလေးချိန်တို့ဖြင့်သာခွဲခြားနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်စျေးနှုန်း၏သင်တန်း။ ရှင်းပါတယ် အရွယ်အစားနှစ်မျိုးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ specs တွေရှာပါ။ အမြဲတမ်းကြီးထွားနေသောဖန်သားပြင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ XZ2 နှင့်သင်၌ Sony မှနောက်ဆုံးပေါ်အရာအားလုံးကိုရရှိလိမ့်မည်။ Compact ဗားရှင်းနှင့်သင်၌မူအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်သည့်အရွယ်အစားရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Sony က » Sony Xperia XZ2 နှင့် XZ2 Compact အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံပါ